14 Makambani Makore Makorosi muUnited States
Makore Akakosha Makorosi muUnited States
Zvikoro izvi zvinonakidza zvinopa kunaka kwezvakanaka uye zvivakwa zvekare
Makamuri makuru epakireji anozvirumbidza matanho anoshamisa, nzvimbo dzakawanda dzemavara, uye zvivakwa zvekare. Kumhenderekedzo yekumabvazuva, nehupamhi hwayo hukuru hwemaunivesiti akakurumbira, inowanzotarisa mazita emakambani ane rudo. Zvisinei, runako harurevi kumhenderekedzo imwe chete, saka zvikoro zvinotsanangurwa pasi apa zvinopararira nyika, kubva kuNew Hampshire kusvika kuCalifornia nekuItaly kusvika kuTexas. Kubvira pamazuva ano ekugadzirwa kwemazuva ano kuenda kuminda yakanaka, tsvaga chaizvoizvo zvinoita kuti makoroji aya ave akakosha zvikuru.
Berry College muRome, Georgia ine vadzidzi vanopfuura 2 000 chete, asi ine kambani yakakura kupfuura dzose munyika. Chikoro chemakiromita 27 000 chinosanganisira nzizi, dziva, matanda, uye meadows zvinogona kufara kuburikidza nehuwandu hwemigwagwa. Iko-makiromita yakareba-refu yakavezwa yeViking Trail inobatanidza chikamu chikuru kumusasa wegomo. Chikoro cheBerry chakakosha kurova nekuda kwevadzidzi vanofarira kufamba, kuenda kumotokari, kana kutasva mabhiza.
Iko musasa musha kune zvivako makumi maviri nemaviri, kusanganisira iyo inoshamisa Mary Hall ne Ford Dining Hall. Dzimwe nzvimbo dzekambani dzine brick tsvuku yeJeffersonian architecture.
Bryn Mawr College ndeimwe yevashandi vaviri vevakadzi kuti vaite izvi. Inowanikwa muBryn Mawr, Pennsylvania, kambani yekorogi inosanganisira zvivako makumi mana zviri ma 135 acres. Zvivako zvakawanda zvine zvivakwa zveChikoro Gothic, kusanganisira College Hall, National Historic Landmark. Hora huru yeimba iyi yakaumbwa shure kwezvivako paOxford University. Iyo yakagadzirwa nemiti yakagadzirwa nemiti inonzi arboretum yakasarudzwa.
Dartmouth Hall kuDartmouth College. kickstand / Getty Images
Dartmouth College , chimwe chezvikoro zvisere zveEki League , iri muHanover, New Hampshire. Yakatangwa muna 1769, Dartmouth ine zvivakwa zvakawanda zvekare. Kunyange kuvakwa kwemazuva ano kunofananidzwa nemusangano wechiGeorgian. Pamwoyo wemusasa ndiyo inonakidza Dartmouth Green pamwe neBaker Bell Tower yakagara yakakwirira kumusoro kuchamhembe.
Musasa wacho unogara pamucheto weRead Connecticut, uye Appalachian Trail inomhanya mumusasa. Nechinzvimbo chakaipa zvakadaro, chinofanira kuuya kushamisika zvishoma kuti Dartmouth ari pamba yekolishi yakakura yekolishi yekubuda kwekambani.
Ponce de Leon Hall yeBlackler College. Biederbick & Rumpf / Getty Images
Paunenge uwana nzvimbo dzakawanda dzekoroji dzakanaka dzekoroji neGothic, Georgian, neJeffersonian mapurisa, Flagler College iri mune rimwe boka rayo. Inowanikwa munhoroondo yeSt. Augustine, Florida, chivako chikuru chekoroji ndiPonce de Leon Hall. Yakavakwa muna 1888 naHenry Morrison Flagler, chivako chacho chinoshandisa basa raizivikanwa nevematongerwo enyika neveinjiniya vane makore gumi nemapfumbamwe, kusanganisira Tiffany, Maynard, uye Edison. Chivako chimwe chezviitiko zvinoshamisa zveSpain Renaissance architecture munyika iyi National Historic Landmark.
Zvimwe zvivako zvinoshamisa zvinosanganisira Florida East Coast Railway Buildings, iyo ichangobva kutendeuka kuva mahofisi ezvigaro, uye Molly Wiley Art Building, iyo ichangobva kuwana $ 5.7 kugadziridza. Nekuda kwechikumbiro chekuvakwa kwechikoro, iwe kazhinji uchawana vatashanyi vakawanda kupfuura vadzidzi vanochera pamusoro pekambani.
Lewis & Clark College. Mumwe Mutendi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Kunyange zvazvo Lewis & Clark College iri muguta rePortland, Oregon, vanodikanwa venyama vachawana zvakawanda zvokuonga. Iyo musasa yakasvibiswa pakati pe645-acre Tryon Creek State Natural Area uye 146-acre River View Natural Area paWillamette River.
Musasa we-137-acre wematanda unogara mumakomo kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta. Kojiji inodada nezvivakwa zvayo zvakagadzikana zvakasikwa uye pamwe chete nhoroondo yeFrank Manor House.
Blair Hall kuPyinceton University. aimintang / Getty Images
Zvose zvikoro zvisere zveChikles yeLiv League zvinonakidza makambani, asi Princeton University yakabuda pane dzimwe nzvimbo dzakakwirira dzemakambani kupfuura mamwe ose. Inowanika muPrinceton, New Jersey, imba yechikoro yehekari mazana mashanu pane zvivako 190 zvinenge zvine shongwe dzakawanda dzebwe uye Gothic arches. Imba yekare yekampus, Nassau Hall, yakapedziswa muna 1756. Zvivako zvitsva zvakakonzerwa nemapuranga ekugadzira, zvakadai saFrank Gehry, uyo akagadzira Lewis Library.
Vadzidzi nevashanyi vanonakidzwa nekuwanda kwemaruva eminda uye miti yakagadzirwa nemiti. Pamuganhu wekumaodzanyemba kwekambasi yeLake Carnegie, pamba pePrinceton crew team.
Lovett Hall paRunives University. Witold Skrypczak / Getty Images
Kunyange zvazvo nzvimbo yeHouston iri nyore kuona kubva pamusasa, Rice University 's 300 acres haanzwi kuguta. Miti 4,300 yemusasa inoita kuti zvive nyore kuti vadzidzi vawane nzvimbo ine shady yekudzidza. The Academic Quadrangle, nzvimbo yakakura yeuswa, inogara pamwoyo wemusasa pamwe neLovett Hall, chivako chinonyanya kuve yunivhesiti, chiri kumabvazuva. Fondren Library inomira pakatarisana nechokuguma kwe quad. Ruzhinji rwezvivako zvemusasa rakagadzirwa muByzantine.
Hoover Tower paStanford University. jejim / Getty Images
Imwe yemayunivhesiti anonyanya kusarudzwa munyika ndeimwe yezvakanyanya kunaka. Stanford Yunivhesiti inogara kumahekre anopfuura 8 000 muStanford, California, pamucheto weguta rePalo Alto. Hoover Tower inomira mamita makumi maviri nepamusoro pemusasa, uye dzimwe dzimba dzinoyevedza dzinosanganisira Memorial Church uye Frank Lloyd Wright's Hanna-Honeycomb House. Yunivhesiti iri kumba kune zvivako mazana manomwe uye mararamiro emapurani ekugadzira, kunyange zvazvo Main Quad iri pakati pekambani ine imwe yakasiyana yeCalifornia Mission nheyo dzaro dzakapoteredzwa uye matenga matsvuku.
Nzvimbo dzekunze dziri kuStanford dzinonakidza zvakaenzana kusanganisira Rodin Sculpture Garden, Arizona Cactus Garden, uye Stanford University Arboretum.
Parrish Hall ku Swarthmore College. aimintang / Getty Images
Swarthmore College 's $ 2 biliyoni yakawanda inowanikwa nyore nyore apo munhu anofamba achienda kumusasa wakanyatsogadziriswa. Yese 425-acre campus inosanganisira yakanaka yeScot Arboretum, mashizha akazaruka, makomo akavezwa, matombo, uye nzvimbo dzakawanda dzomugwagwa. Philadelphia iri makiromita 11 chete.
Parrish Hall uye dzimwe dzimba dzekare dzemusasa dzakavakwa muchikamu chechipiri chezana remakore rechi19 kubva kunzvimbo yegrey gneiss uye schist. Nekusimbiswa kune zviri nyore uye zvakaenzana zviyero, chivakwa chacho ndechechokwadi cheChiaker yechizvarwa.
Quad, University of Chicago. Bruce Leighty / Getty Images
Yunivhesiti yeCichicago inogara makiromita masere kubva kuDowntown Chicago muHyde Park mhiri pedyo neLake Michigan. Iyo huru campus ine zvitanhatu zvigodrangles dzakakomberedzwa nezvivakwa zvinonakidza zvine chinyorwa cheChirungu cheGothic. Oxford Yunivhesiti yakafuridzira zvakawanda zvekuvakwa kwekutanga kwechikoro, asi dzimwe dzivako zvemazuva ano zvakajeka mazuva ano.
Inzvimbo yacho inosanganisira dzimwe National Historic Landmarks, kusanganisira Frank Lloyd Wright Robie House. Ima 217-acre campus ndiyo munda wakasarudzwa webhodanic.
Jesu Statue uye Golden Dome kuYunivhesiti yeName Dame. Wolterk / Getty Images
Yunivhesiti yeName Dame , iri kuchamhembe kweIndia, inomira pamusasa we150-acre. Main Building Golden Dome ndiyo inonyanya kuzivikanwa pakugadzirwa kwekoroji yekoroji munyika. Iyo paki huru-yakafanana nekampus ine nzvimbo dzakasvibirira, mairi maviri, nemakuva maviri.
Zviri pachena kuti iyo inoshamisa zvikuru yezvivako makumi mapfumbamwe nemasere pamusasa, Basilica yeChred Heart inosvika makumi mana nemasere akavhara mahwindo emawindo, uye iyo Gothic Tower inosvika mamita 218 pamusoro pemusasa.
Chikoro cheBhizinesi reBhizimisi paYunivhesiti yeRichmond. Talbot0893 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Yunivhesiti yeRichmond inotora mamita 350 maekare kunze kweRichmond, Virginia. Zvivako zveyunivhesiti zvinowanzovakwa kubva muzvidhinha zvitsvuku muColgiate Gothic style iyo inozivikanwa pamisasa yakawanda. Zvizhinji zvezvivako zvekare zvakagadzirwa naRalph Adams Cram, uyo akagadzirawo zvivakwa kune mamwe makambani maviri munyaya iyi: Rice University uye Princeton University.
Yunivhesiti inofadza zvivakwa zvivakidzani inogara pamusasa unotsanangurwa nemiti yawo yakawanda, migwagwa inotyisa, uye magomo. Mudzidzi wevadzidzi-Tyler Haynes Commons-anoshumira sebhuriji pamusoro peWesthampton Lake uye anopa maonero akanaka kuburikidza nemahwindo aro-kusvika-pane.
Tsime paYunivhesiti yeWashington muSeattle. gregobagel / Getty Images
Inowanikwa muSeattle, Yunivhesiti yeWashington ingangodaro yakave yakanakisisa apo yakawanda maruva maruva anotumbuka mukati megore. Kufanana nevakawanda vezvikoro pane urongwa, zvivako zvekutanga zvemu campus zvakavakwa muColgiate Gothic style. Zvivako zvakakosha zvinosanganisira Suzzallo Library neimba yake yokuverenga yakazara, uye Denny Hall, chivako chakare kupfuura zvose pamusasa, ine gumi rayo rainzi Tenino sandstone.
Nzvimbo yakakonzera nzvimbo yacho inopa maonero emakomo eOlympic kumadokero, Cascade Range kumabvazuva, uye Portage uye Union Bays kumaodzanyemba. Iko-703-acre miti yakagadzirirwa musasa ine zvinhu zvakawanda zve quadrangles uye nzira. Kuda kwemashoko kunowedzera nekugadzirisa kunokonzera kupisa motokari kunzvimbo dziri kunze kwemusasa.
A walkway paWellesley College musasa. John Burke / Getty Images
Iri mune rimwe guta rakabudirira riri pedyo neBoston, Massachusetts, Wellesley College ndeimwe yepamusoro-soro yevashandi vekorosi munyika. Pamwe chete nevadzidzi varo vakanaka, koroji iyi yevakadzi ine kambani yakanaka yakatarisana neLake Waban. Gothic bell shongwe yeGreen Hall inomira kune rumwe rutivi rwekudzidzira quadrangle, uye dzimba dzekugara dzakabatanidzwa mumusasa unosangana nemigwagwa inofambisa mumapango nemasango.
Iko musasa musha kune gorofu, dziva, gungwa, kuputika kwemakomo, bindu re botanic uye arboretum, uye nzvimbo yakawanda yezvigadzirwa zvekudhinha nematombo. Pasinei nehombe yechando paParamecium Pond kana kufara nokuvira kwezuva pamusoro peLake Waban, vadzidzi veWellesley vanozvikudza zvikuru mumusasa wavo wakanaka.
Torai Photo Tour yeBabson College Campus
Nhoroondo yeSerial Killer Richard Cottingham
Inguva Yomukati Inobata Zvakaipa Mune Utano Hwako Here?
Misangano yeChikoro Kubatsira Mutevedzeri, Kutsika Kwevadzidzi
'Zvitsva' Car Break-in Method: Hole Under Door Lock
Kugadzira Zvinyorwa Zvitsva Kufamba Padhigiramu
Neutron Bhozi Neshoko
Nzira Yekutaridzira Tire Recalls
MEDINA - Zita rekupedzisira Mavambo uye Chinangwa
Zvematongerwe enyika Punk Bands
Nzira Yokuita Sei Muchiedza Chinopenya
Chii Chinonzi Complementizers?
An Insider's Tarisa Taoist Cosmology
Kurudyi, Rite, Wright, uye Nyora
10 Munguva pfupi yapfuura Yakapera Shrews, Bats uye Vanodhi
Kunzwisisa State yeOhio Salvage Title Mitemo
Nei ChiSpanish Chiri Pane Dzimwe nguva Chinonzi Castilian
Chii chinonzi Mangrove?
Nzira yekuwedzera kuendesa kwemvura
Nhoroondo yeGiacomo da Vignola
Unhu Hwose MuMoby Dick